Tuesday June, 28 2022 - 19:28:00
Wednesday September 01, 2021 - 08:21:49 in by salman abdi
Somgas Company Somaliland waxa ay shaqada bilawday 2009, iyadoo ujeedkeeda ugu wayni ahaa badbaadinta deegaanka iyo soo kordhinta adeegyadda caalamiga ah ee dhuxusha looga maarmayo.
Markii ay shirkadda Telesom Aragtay xaalufinta ka socda Somaliland waxay u fikirtay innay abuurto Shirkadda Somgas Company si ay wax uga qabato deegaankan la xaalufmay, dhirtan la googooyay iyo nabaad guurka ilaa imika jira, Intii ay Somgas waddanka ka bilawday Gaasta cuntadda waxa bad-baaday malaayiin geed oo la jari jiray.
Xarunta ugu wayn ee kaydibta Gaastu waxay ku taalaa Berbera halka xafiiska guud ee maamulku ku yaalo Hargeysa waxaana shirkadda ugu Maareeye ka ah Sheekh Cabdiraxmaan Shaqale, oo in badan ahaa Maamulaha Iibka ee telesom.
Intii Somgas jirtay Waxaa hoos u dhac wayni ku yimid dhuxushii iyo dhirtii qoyanayd ee la jari jiray, waxa hoos u dhacay isbeddel dareemay Wasaaraddii Horumarinta deegaanka oo Ciidankii badnaa iyo kharashkii badnaa ka dhinmay. Waxaana abuurmay shaqooyin badan oo waxay noqotay shirkad ay u shaqeeyaan boqolaal Dhallinyaro ah oo goboladda oo dhan ah.
Shirkada Somgas oo kamida Shirkadda Telesom waxay hal abuurtay Baahi wayn oo loo qabay in deegaanku badbaado dadkuna ka raystaan Dambaskii iyo qiiqii joogtadda ahaa.
Mar aan wax ka waydiiyey Maamulaha Guud ee Shirkadda Somgas Sheekh Cabdiraxmaan Shaqale wuxuu ii sheegay innay markasta kor u qaadayaan Adeegyadda ay bixiyaan guud ahaan dalka oo dhan oo ay isbedel u taagan yihiin isagoo carabaabay innay keeneen Haamo si fudud looga dhex arki karo Gaasta ku jirta sidoo kalena ay wadaan Qorshayaal Geeska Africa oo dhan lagu gaadhsiinayo Gaaska Somgas.
Shirkadda Somgas ayaa imika Gaasta Gaadhsiisa waddamadda aan jaarka nahay ee Putland iyo Somaliya.
Shirkadda Somgas waxay xarumo waaweyn ku leedahay dalka oo dhan, waxay abuurtay shaqo abuur, waxay keentay farsamooyinkii Gaasta oo si casri ah laguugu rakibayo gurigaaga, Huteelkaaga iyo ganacsigaagaba.
Xalka kaliya ee u baahan in Somgas qorshaha ku darsato waa sidii Dadkii dhuxusha ka ganacsan jiray ee miyiga camal ay kaga maarmaan loogu sameyn lahaa.
Ujeedka guud ee Somgas waa badbaadinta deegaanka iyo la talaabsiga casriga caalamka.
Daawo: Duruufaha iyo Harraadka ka jira Deegaano badan oo soomaliyeed
08/06/2022 - 11:19:55
Daawo:Maxmed Ka wada hadleen Madaxweynaha Somaliland iyo Madaxda Urursiyaasadeedyada Somaliland lagaga dhawaaqay?
26/05/2022 - 08:06:23
Daawo: Nuxurkada Qodobadii lagaga dooday Kal-fadhigii 6aad ee Golaha Deegaanka degmada Berbera oo maanta furmay
25/05/2022 - 20:22:04
Daawo: Xil Maxmed Abiib oo ka hadlay Halka khilaafka golugu salka ku hayyo
23/05/2022 - 18:19:22
Daawo: Adaabta Salaatu laylka iyo Sh Maxmed Cumar Dirir
28/04/2022 - 11:06:31
Daawo:XIldhibaano ka hadlay Hanjabaadi uu Taliyaha Boolisku u geystay Xil Maxmed Abiib
17/04/2022 - 09:26:15
Daawo: XIldhibaan Maxmed Abiib oo si adag uga hadlay Ereyo uu ku yidhi Taliyaha Booliska JSL Dabagale
16/04/2022 - 21:18:09
Daawo: Shirkadda Dahabshiil Group oo Guddida Taakuleynta Suuqa Waaheen ku wareejisay $700,000
11/04/2022 - 11:01:56
Daawo: Shirkadda GACAL oo Berbera ka furatay Xarumo kale oo cusub
10/04/2022 - 20:59:11
Ogeysiis Somgas Somaliland
08/04/2022 - 22:13:48